Bit By Bit - dhaqanka loo kuurgalo - 2.3.7 Muuqashada
Dhibaatada dadka, daroogada isticmaalka, iyo dariiqa socodka ayaa adkeynaya in ay isticmaalaan ilaha xogta waaweyn si ay u bartaan isbeddelada muddada dheer.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka waaweyn ee ilaha xogta badan oo waaweyn ayaa ah inay ururiyaan xog waqti ka badan. Cilmi-baarayaasha bulshadu waxay ugu yeeraan xogtan wakhtiga-dheer ee xogta dheeraadka ah . Iyo, dabiiciga, xogta dheeraadka ah waxay aad muhiim u tahay barashada isbeddelka. Si loo yareeyo isbeddelka isbeddelka, si kastaba ha ahaatee, nidaamka cabbirka laftiisu waa inuu ahaado mid degan. Ereyada cilmi-nafsiga ee Otis Dudley Duncan, "haddii aad rabto inaad cabirto isbeddel, ha bedelin qiyaasta" (Fischer 2011) .
Nasiib darro, habab gaar ahaan dad badan oo data weyn nidaamyada-yihiin ganacsi waqtiga oo dhan la beddelo, nidaamka ah in aan soo wici doonaa miyigii. Gaar ahaan, nidaamyadani waxay isbeddelaan saddex siyood oo muhiim ah: dadku waa ay isbedelayaan (isbedelka kuwa isticmaalaya), isbedelka dabeecadda (isbedelka sida dadku u isticmaalayaan), iyo nidaamka qulqulka (isbeddelka nidaamka laftiisa). Sadexda ilood ee wabiga ah micnahoodu waa in qaab kasta oo laga helo ilaha xogta ee weyni ay sababi karto isbeddel muhiim ah oo adduunka ah, ama waxaa laga yaabaa in ay sababto nooc ka mid ah daroogada.
Ilaha ugu horreeya ee dadku u baddelaan - waxay sababaan isbeddelka cidda isticmaalaysa nidaamka, isbeddeladani waxay ku dhici karaan wakhtiyada gaaban iyo kuwa dheerba. Tusaale ahaan, intii lagu jiray doorashadii madaxweynenimada ee sannadkii 2012 saamiga tweets ee ku saabsan siyaasadda ee ay qoreen haweenku maalinba maalinta ka (Diaz et al. 2016) . Sidaa darteed, waxa laga yaabo inay u muuqdaan inay isbeddel ka muuqdaan muuqaalka Twitter-ka dhab ahaantii waxay noqon kartaa isbeddel ku yimaad cidda hadlaysa mar kasta. Marka lagu daro isbeddelladan muddada gaaban, waxaa sidoo kale jira wakhti dheer oo isdabajoog ah oo kooxo dad ah oo qaarkood ay aqbalayaan oo ka tageen Twitter.
Marka laga soo tago isbeddelka cidda isticmaalaysa nidaamka, waxaa sidoo kale jira isbedelo ku yimaada habka loo isticmaalo, kaas oo aan ugu yeerayo akhlaaqda akhlaaqda. Tusaale ahaan, inta lagu guda jiray 2013-kii Mashruuca Guriyeynta ee Turkiga, dibad-baxayaashu waxay bedeleen isticmaalka ishtags maaddaama uu dib-u-soo-noolaanshaha u kordhay. Halkan waxa ah sida Zeynep Tufekci (2014) lagu sharxay habdhaqanka habdhaqanka, taas oo ay awood u yeelatay in la ogaado sababta oo ah waxay dabeecad ku samaysay Twitter iyo shakhsi ahaan:
"Waxa dhacay waxay ahayd markii ugu horeysay ee ay mudaaharaadku noqoto sheekada ugu weyn, dad badan oo badan ... joojiyay isticmaalida isqagooyinka marka laga reebo inay soo jiidaan indho-indheyn cusub ... In kasta oo ay dibad-baxyadu sii socdeen, oo xitaa ay sii xoogeysteen, hashtags ayaa dhimatay. Wareysiyadu waxay shaaciyeen laba arrimood. Marka hore, mar walbana waa ogaa mawduuca, hashtag wuxuu ahaa mid aad u sarreeya oo lumiya dareenka bogga Twitter-ka ah. Marka labaad, hashtags ayaa loo arkaa inay yihiin waxtar u leh soo jiidashada dareen gaar ah mawduuc gaar ah, maaha inay ka hadlaan. "
Nooca seddexaad ee darfaha waa nidaam darbi. Xaaladdan, ma aha dadka isbeddelaya ama dabeecadooda badaleysa, laakiin nidaamka laftiisa isbeddelayo. Tusaale ahaan, wakhti badan oo Facebook ah ayaa kordhiyay xaddiga dhererka xaaladaha cusub. Sidaa darteed, daraasad joogto ah oo ku saabsan cusbooneysiinta xaaladda ayaa noqonaysa mid u nugul farshaxanada sababtay isbedelkan. Dhibaatada nidaamka ayaa si aad ah ula xiriirta dhibaatada loo yaqaan algorithmic confounding, oo aan dabooli doono qaybta 2.3.8.
Si loo soo gabagabeeyo, ilo macluumaad oo badan oo waawayn ah ayaa isbedelaya sababtoo ah is-beddelada cidda isticmaalaysa, sida loo isticmaalo, iyo sida nidaamyadu u shaqeeyaan. Meelahan isbeddelka ah mararka qaarkood su'aalo cilmi baaris oo xiiso leh, laakiin isbeddelladani waxay sii adkeynayaan awoodda ilaha xogta ee weyn si ay ula socdaan isbeddelada mudada dheer ee mudada dheer.